QM oo sheegtay in daadadkii ku dhuftay gobolada Sh/dhexe iyo Hiiraan ay saameeyeen 400,000 qof.
Daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo dhowaan ka da’ay guud ahaan Soomaaliya ayaa saameeyay dad lagu qiyaasay 400,000 oo ku nool 14 degmo tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil, sida ay sheegtay hay’adda gargaarka ee Qaramada Midoobay.Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwaha ee Arrimaha Bani’aadamnimada (OCHA), ayaa sheegay, in Ilaa 101,300 oo qof oo ka mid ah dadkii ay dhibaatadu saameysey ay ka barokaceen guryahooda.
Hadalkan ayaa yimid maalmo kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu sheegay in dowladdu ay la imaan doonto istiraatiijiyad lagu yareynayo xalna loogu raadinayo daadadka joogtada ah ee dalka ka dhaca.Rooble, oo booqday meelaha ay daadadku ku dhufteen ee gobolka shabeeladda dhexe, ayaa sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay xaalad bani’aadamnimo oo aad u xun oo ka jirta Jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran. Illaa iyo hadda, 25 qof ayaa ku dhimatay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay dhowr meelood oo Soomaaliya ah.
« Hay’adda FAO oo digniin ka soo saartay Qatarta Anyaxa.
Boliiska Soomaaliya oo War ka soo saaray Qaraxii Maanta ka dhacay Ex Kontarool Afgooye. »